Lix cudur oo uu DAAWO u yahay shaaha lagu daro SANJABIISHA! | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Lix cudur oo uu DAAWO u yahay shaaha lagu daro SANJABIISHA!
(Hadalsame) 04 Nof 2021 – Sanjibiishu waxa ay ka mid tahay dhir daaweedka qarniyada badan ay dadka dunidu u isticmaalayeen daaweynta xanuuno kala duwan. Cilmiga cusub ayaa ka marag kacay in sanjabiishu ay tahay dawo waxtar badan.
Previous articleTurkiga oo lagu eedeeyey in uu gantaalaha S-400 soo dhigay meel ay deggan yihiin Ciidanka Maraykanka, NATO (Jawaab uu soo saaray)
Next articleFaa’iidooyinka faraha badan ee XULBADA & xanuunnada ay dawada u tahay